Sony Vegas Pro 16 Crack [Nohavaozina in Febroary 2021] - Fampidinana Maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Sony Vegas Pro 16 Crack
By Eva Williams, Mathis Ravatomanga 2021-02-18, Malagasy Blog
Raha te-hisintona ny triatra Sony Vegas Pro 16 crack ianao nefa misalasala raha azo antoka ny fampiasana rindrambaiko tsy misy fahazoan-dàlana, alao antoka fa hamaky ny famerenako hianaranao bebe kokoa momba ny tombotsoan'ny kinova manana fahazoan-dàlana sy ireo fitaovana tsy voafetra.
Free Sony Vegas Pro 16
Vegas Pro dia rindrambaiko fanovana horonantsary ho an'ny Windows ho an'ny matihanina sy mpankafy. Izy io dia tonga lafatra amin'ny famoronana rakitra raki-peo marobe, ary koa ho an'ny fanitsiana ny riaka horonantsary sy audio.
Amin'ny maha rafitra multitrack nomerika ho an'ny horonantsary sy fanitsiana am-peo tsy mandeha amin'ny laoniny, Vegas dia mamela ny fiasana amin'ny horonan-tsary sy feon-kira tsy manam-petra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia tonga miaraka amina làlan'ny A / B tsirairay avy.
Raha mbola mieritreritra ny hampiasa ny triatra feno Sony Vegas Pro 16 ianao dia mariho fa ny kinova feno dia manasongadina fitaovana mozika mandroso ary manohana ny fivoahan'ny fantsona marobe amin'ny fomba feno duplex.
Vegas Pro 16 endri-javatra:
Mora ampanjifaina ny interface an'ny mpampiasa
Ianao dia afaka manova baraovana amin'ny tsironao amin'ny alàlan'ny fisafidianana izay fitaovana mety ilainao sy manala ny ambiny. Tena manampy tokoa rehefa mila mampiasa fitaovana sasany matetika kokoa noho ny hafa ianao.
Ny fanaingoana ny toolbar dia ahafahana mandroso ihany koa ny fizotran'ny asa. Ohatra, ny mpampiasa iray dia afaka manapa-kevitra hoe firy ny tadim-panoratana tokony hiarahan'izy ireo miasa. Na dia mety tsy mila fiasa toy izany aza ireo vao manomboka, dia mora raisin'izy ireo ho an'ny matihanina malaza indrindra.
Fitaovana 3D Source Alpha
Mba hamoronana vondrona mitambatra amin'ny lalan'ny ray aman-dreny sy ny zaza ary afindra ao amin'ny habaka 3D dia azonao atao ny manandrana ny endrika 3D Source Alpha. Izy io dia ahafahanao mampiasa vokatra manokana isan-karazany, ary koa manatsara ny jiro sy ny jiro any aoriana.
Amin'ny fampiasana ny fitaovana 3D Source Alpha, azonao atao ny manampy lahatsoratra amin'ny lalanao ary manova azy amin'ny habaka 3D.
Safidy fanondranana mandroso
Raha misafidy kinova manana fahazoan-dàlana ianao fa tsy ny triatra Vegas Pro 16 dia mariho fa noho ny codecs natsangana dia afaka mamadika mora foana ny fisieo ianao ho iray amin'ireo endrika malaza. Tsy toy ny vokatra rindrambaiko hafa mitovy amin'izany, ny Vegas Pro dia miloka menio mandanjalanja tsara izay mamela ny famadihana rakitra haingana kokoa. Tsara kokoa noho ny menio an'ny Adobe Premiere miaraka amin'ireo endriny maro izay tsy mila ampiasainao matetika.
Mba hanodinana ireo rakitra audio amin'ny maody amin'ny fotoana tena izy, dia alao antoka fa hametraka Equalizer parametric sy bande compresseur efatra-bandy ao anaty elanelan'ny feon-kirao.
Inona koa, raha manapa-kevitra ny tsy hisintona ny triatra Sony Vegas Pro 16 ianao, dia afaka mampiasa 32 alefa any amin'ireo plugins misy endrika DirectX amina kopia manana fahazoan-dàlana. Azo atao koa ny mampiditra endrika data isan-karazany amin'ny làlana iray miaraka, tsy manova na manome azy ireo azy aloha.
Rafitra fiasa Windows: avy amin'ny Microsoft Windows 7 (64-bit fotsiny)
Processor Generation faha-6 Intel Core i5 (na mitovy AMD) na tsara kokoa. 2.5 Ghz ary farafahakeliny 4 Core. Ho an'ny 4k, 7 Generation Intel Core i7 (na AMD mitovy) na tsara kokoa. 3.0 Ghz ary farafahakeliny 8 Core
Storage 1,5 GB habaka kapila mafy hametrahana programa; Kapila matevina (SSD) na RAID multi-hafainganana haingam-pandeha ho an'ny haino aman-jery 4K
ram 8 GB ram farafahakeliny (16 GB atoro; 32 GB atoro ho an'ny 4K)
Filename: win_sony_vegas_pro_16.exe (download)
Filename: mac_sony_vegas_pro_16.exe (download)
Filename: 1_sony_vegas_pro_16_tools.exe (download)
Filename: 2_sony_vegas_pro_16_tools.exe (download)
Rindrambaiko Fanovana horonantsary maimaim-poana